Akatsungirira Pairwisana Vanhu Uye Aikoshesa Zvekunamata | Thio Seng Bie
AKABEREKWA MUNA 1906
AKABHABHATIDZWA MUNA 1937
NHOROONDO YOUPENYU Mukuru weungano akatsungirira kurwisana kwaikonzerwa nerusarura.—Nyaya iyi yakataurwa nemwanasikana wake Thio Sioe Nio.
MUNA May 1963, muWest Java makamuka mhirizhonga yaikonzerwa nevaivenga vanhu vekuChina. Muguta reSukabumi ndimo makanyanya kutsviriridza mhirizhonga yacho, munova ndimo mataiitira bhizimisi rekutakura zvinhu nemarori. Mazana evanhu vaipengereka, kusanganisirawo vavakidzani vedu, vakapaza ndokupinda pamba pedu. Takabva taungana pamwe chete tichibvunda nekutya, uku vanhu vacho vachiparadza zvinhu zvedu, vamwe vachitibira.
Mhomho yacho payakanga yaenda, vamwe vavakidzani vedu vakauya kuzotinyaradza. Baba vangu vakagara pasi muimba yedu yekutandarira pamwe chete navo. Vakabva vaona Bhaibheri ravo guru rechiSundanese riri pakati pezvinhu zvedu zvakanga zvangoita ungwanda-ngwanda. Baba vakavhurira vavakidzani vedu Bhaibheri racho ndokuvaudza kuti matambudziko iwayo akagara ataurwa. Vakabva vatsanangura nezvetariro inofadza yeUmambo.
Baba vangu havana kumbobvira vaisa pfungwa dzavo pakuunganidza pfuma panyika. Vaigara vachitiudza kuti: “Zvinhu zvekunamata zvinofanira kuenda pekutanga!” Muenzaniso wavo wekushingaira ndiwo wakabatsira amai, nesu vana vavo 6, nababa vavo vakanga vava nemakore 90, uye hama dzedu nevavakidzani vakawanda kuti vagamuchire chokwadi.